napetraky positron ny Thu, 06 / 29 / 2017 - 23: 23
driveshaft Tsy anjara
I Niova ny impeller amin'ny 3 HP 1952-54 (JW-1) Johnson. Tahaka ny nanesorako izany mitokana, ny ambany sampana latsaka tamin'ny tany. Ankehitriny, ny driveshaft tsy anjara ny Mpanosika. Izany dia nanosika teny amin'ny lalana rehetra. Misy zavatra hafa manan-danja, na mazia izay mahatonga ny Mpanosika indray?
napetraky boatman350 tamin'ny Wed, 01 / 23 / 2019 - 10: 29
Namaly ny driveshaft Tsy anjara by positron
dia nalaiko ny fiara ambany ary averiko indray ny tifoka ho hita eny rehetra eny fa tsy hitako fa raha mihazona ny vondrona ambany ianao dia ny tohatra dia mankany amin'ny valindrihana ary ianao hijery ny lavaka dia Aza misokatra ho an'ny sambo fa raha mihazona izany ianao dia miatrika ny rindrina ny fanalahidy kely kely tahaka ny zavatra hivoaka ao amin'ny tranokely
napetraky boatman350 ny Thu, 06 / 06 / 2019 - 07: 26
rehefa nalaiko ny vatako ambany ...
Rehefa naka ny fiaramanidina ambany teo amin'ny fiara fitaterana aho dia tsy hipetraka ao amin'ny efitrano ho ahy dia tsikaritro fa misy karazana "lakile" izaho dia voatery mihazona ny onja ambany amin'ny sisin'ny fiara miatrika ny valindrihana
napetraky ttravis ny Thu, 06 / 29 / 2017 - 23: 42
Ity misy diagram. https: / ...
Ity misy diagram. http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1957&…
- Fanavaozana - nanamboatra ny rohy aho.
napetraky positron tamin'ny Fri, 06 / 30 / 2017 - 22: 54
Namaly ny Ity misy diagram. https: / ... by ttravis
Rohy mankany amin'ny sary dia maty. Tsy ...
Rohy mankany amin'ny sary dia maty. Tsy fantatsika hoe inona no "youtu.be" dia fa tsy YouTube!
napetraky ttravis tamin'ny Sat, 07 / 01 / 2017 - 07: 04
Namaly ny Rohy mankany amin'ny sary dia maty. Tsy ... by positron
Ny ratsy .... Andramo ity: http: ...
Ny ratsy ... Ataovy ity: http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1957&…
napetraky jakeboat amin'ny Mon, 07 / 10 / 2017 - 23: 17
Ity ny toe-javatra ananako, ary miala tsiny mialoha aho raha tsy ity toerana ity na ny format manan-kery ho an'ny fanontaniako fa vaovao aho ho an'ny forums tahaka izao. Manan-janakalahy iray izay tia ny mpanjono aho ary nanjary nanarato nandritra ireo taona vitsy lasa izay fa miha-antitra izy ka te hivoaka amin'ny farihy. Vaovao tsara no iainantsika any Minnesota satria farihy maro be, vaovao ratsy dia tsy mbola nisy sambo maro velively. Nahazo ny 14'boat / trailer avy amin'ny olona iray sy ny moter lightwin 3hp. Tsara aloha izy ireo nilaza fa mandeha tsara. Naka fotoana lavalava izahay ary nihazakazaka tsara. Amin'ny alehako dia midika fa ny fantsona feno dia mbola miadana, saingy nieritreritra aho hoe io 3hp io, tsy maintsy nitazona ny fantsona 3 / 4 mba ho feno azy io aho. Avy eo dia nanomboka maty izy, avy hatrany. Voamariko fa imbetsaka izy io no namoha lalana momba ny 3 segondra, angamba amin'ny toerana tokony ito. Saingy saika nandao anay tany amin'ny farihy izahay ary tiako ny hanambatra azy miaraka, fa izaho dia vaovao amin'ny motera 2. Hatreto dia nanova ny plugs aho ary nanala tanteraka ny entona hanomboka vaovao. Ataovy izany ary asio toy ny teo aloha. Izay tari-dalana / fitarihana dia ho ankasitrahana. Avy amin'ny famakiana ity tranokala ity tahaka ny kitapo karbasa dia fanombohana tsara. Soso-kevitra rehetra?
Ny Motor dia Evinrude 3hp lightwin model 3602e.
Tiako ny afaka mampianatra ny zanako momba ny motera amin'ny sambo ary ity dia toa tahaka ny tetikasa fanombohana tsara.
napetraky ttravis amin'ny Mon, 07 / 10 / 2017 - 23: 35
Namaly ny mila vonjy by jakeboat
Makà jereo kely ny tsara ...
Jereo tsara ny jiro. Ny dikan'ny hoe ALL 3 HP motors izay mila coils vaovao, ary mety hanova ny hevitra sy ny fitondran-tena rehefa eo ianao. Tsy afaka milaza ianao raha tsy ratsy ireo sehatra ireo amin'ny fijerena azy ireny.
Jereo ny 3 ary koa HP 5.5 ignition miray feo-ny pejy.
Aho hanao feno miray feo-tahaka nataoko teo anatrehan'i mba miverina aho zanako mahamenatra izany.
napetraky jakeboat amin'ny Mon, 07 / 10 / 2017 - 23: 42
Namaly ny Makà jereo kely ny tsara ... by ttravis
Aiza no hahitako ny miray feo ny ...
Aiza no ahitako ny lokanao?
napetraky Ram Jet tamin'ny Sun, 02 / 11 / 2018 - 23: 20
Nividy Johnson 3 HP aho ary nanamboatra azy io. Manana traikefa mahazatra aho miaraka amin'ireo boaty sy milina 2. Nalefa ny lahatsoratro tamin'ny volana jolay lasa teo, saingy niara-niditra aho. Raha afaka manampy ahy foana aho. Ny Johnson 3 dia miavaka ankehitriny miandry ny ampahany fanoloana. Mazava ho azy fa milina mahafinaritra sy mora ampiasaina - natao mba hahatongavana. Raha toa ka tsy fantatrao fa i Johnson sy Evinrude ihany no motera fototra.
napetraky jakeboat amin'ny Mon, 08 / 01 / 2017 - 20: 41
Dia nahazo ny faritra rehetra for ...
Noho izany dia nahazo ny ampahany rehetra amin'ny rafitra fanala avy amazona aho noho ity tranonkala ity. Tena mora ilay izy. Narahiko ny dian-tsofina nifanaraka tamin'ny fe-potoana tamin'ny fampiasana ohm metatra iraisana ary izany no toerana very ahy. Tsy mahafantatra na inona na inona momba ny herinaratra aho fa ny tenin-tsoratra toy ny misokatra mangina tsy misy fiafarana sns. Mifangaro amiko.
Inona no fitaovana ilainao hitsapana izany? Aiza no itarihako ny fitarihana roa? Ilay mpandahateny ilay lehilahy tao amin'ny trano fivarotana fiara dia namidy ahy ihany fa misy horonantsary iray mihevi-tena ho diso aho. Ahoana no ahafantarako hoe iza no isa iray na roa?
napetraky ttravis amin'ny Mon, 08 / 01 / 2017 - 23: 23
Namaly ny Dia nahazo ny faritra rehetra for ... by jakeboat
Alao sary tsotra faritra ...
Manaova sarin-tseroka tsotra iray izay ahitana biriky sy jiro mena. Rehefa manana tady avy amin'ny batterie ianao mankany amin'ny jiro, ary avy eo amin'ny jiro indray miverina amin'ny batterie, manana sikina mihidy ianao. Mivezivezy eny amin'ny lalana tsy mety tapitra ny herinaratra rehefa mivoaka ny lafiny iray amin'ny batterie ary mankany amin'ny faritra ilany. Raha te hanapaka ny iray amin'ireo doka ianao, dia manokatra ny faritra ianao, toy ny fiakaran'ny hafanam-pamonoana ary manidy ny faritra ho any amin'ny lampihazo. Ny valin-drihana dia miasa toy izany .... manokatra na manakatona azy ireo.
Izay no mizaha toetra ny dia ho azo antoka ny mpandika hevitra amin'ny marina akaiky ny fotoana izay ny fotoana marika eo amin'ny flywheel dia mifanaraka tsara amin'ny fotoana stator marika eo amin'ny fipetrahany izy.
Raha mandray ny ohm metatra ianao ary mifandray ireo tavoahangy roa dia hampiseho ny 0 na ny faritra mihidy ny ohm omenanao. Raha tsy mifankatia ny famantaranandro, ny famakian-teny dia tsy misy dikany na tsipika misokatra. Misy metam-oh oh ohatr'ireo metatra ohm dia misy toerana izay hamenoan'ny metatra ary mihidy ny faritra. Izany dia antsoina hoe test continuity.
Ny ohm metatra dia azo ampiasaina mba hitsapana raha misy faritra mihidy na mihidy. Andeha ho lazaina fa te-hizaha ny jiro fatoriana mahazatra isika. Raha mametraka lohanà ohm metatra ianao eo amin'ny fototry ny jiro, ary ny iray eo afovoan'ny connecter, ny ohm metatra dia hanamarina raha afaka mamakila ny jiro ny jiro. Raha tapaka ilay fametahana, dia mivoha ny faritra arakaraky ny fanoherana tsy manam-petra (tsy manidina amin'ny rivotra amin'ny rivotra ambany ny herinaratra) noho izany dia mihidy ny faritra ary tapaka ny jiro. Raha mahazo famakiana amin'ny ohm metatra 0 na 0 ianao, dia mamakivaky ny filaminana ny herinaratra ary tokony ho tsara ny jiro. Ny ohmmeter dia tsy mandefa ny herinaratra ampy mba hampirehitra ny jirony, fa hanamarina ny tsy fisian-tetezana, na raha mivoha na mihidy ny faritra.
Ity misy YouTube Video momba ilay foto-kevitra.
Makà akaiky Jereo ny 5.5 HP Ignition Page izay anaovako asa tsara kokoa manazava ny fomba hitsarana ny fandaharam-potoana. Izy io dia karazana iray hafa, fa ny rafitra fanarenana dia mitovy mitovy ihany koa. Mamporisika ny olona matetika hamaky ny 3.5 sy 5.5 HP aho.
Ny fitsapana mitarika anao amin'ny ohm dia tsy hiditra eo ambanin'ny vitsika mba hitsapana ny fandaharam-potoana mba hahafahanao mampifandray ny tapa-taratasy kely fohy amin'ny teboka. Test tariby Amin'ny clic ireo mpanakanto dia mora sy mora. Azonao atao ny manala azy ireo amin'ny magazay ao an-toerana, na Amazon. Ampiasao ny iray amin'ny tady fanandramana mankany amin'ny efamira fisarihana amin'ny teboka iray, izay hampidirinao amin'ny ankapobeny ny bobongolo sy ny condenser aseho ao amin'ny 5.5. Omeo ny lavaka hafa amin'ny tady fitsapana any amin'ny lavaka iray eo amin'ny fotony.
Azonao atao ny mandinika raha manokatra na mihidy ny hevitrao amin'ny alalan'ny fampifandraisana ny fitarihana ny ohm omenao amin'ny loham-pitsapana, ary ny iray amin'ny fototra. Amin'ny alàlan'ny tany dia midika hoe metaly marefo na fitambaran-kitapo ny motera. Ny motera dia ilay fitarihana hafa.
Ankehitriny ianao dia vonona ny hanodina ny tadim-bilona ary hijery raha tapitra ny diarim-paritra rehefa voalahatra araka ny tokony ho izy ny fe-potoana.
Dia mila mamerina izany fomba mba hanitsy ny fotoana amin'ny lafiny iray hafa manondro ny mpandika Varingarin'i hafa.
Manantena aho fa hanampy izany. Tom
napetraky jakeboat ny Thu, 08 / 03 / 2017 - 22: 21
Namaly ny Alao sary tsotra faritra ... by ttravis
Wow, izay faran'izay mahasoa. ...
Wow, tena nahasoa izany. Narahiko ireo torolàlana ireo ary nahavita nameno ny rafitra fanararaotana. Nataoko tao anaty siny izany ary nihazakazaka aho. Nihatsara bebe kokoa izany saingy mbola tsy hiverina hivoatra avo dia avo, ary ny setro-tsoka mena dia tsy maninona raha nanitsy ny karba aho. Mihazakazaka tsara kokoa izy io rehefa mamadika ny manitsy ny bokotra ankavanana aho, fa manomboka eo alohan izany dia mihodina izy.
Nieritreritra aho fa afaka mitsambikina ny kitapo karba satria noho ny zavatra hitako tamin'ny girika nitongilana, dia toa vaovao izany. Na izany aza, mieritreritra aho fa hanao ny kitapo karbad rahampitso.
Misaotra noho ny fanampiana rehetra nahasosotra azy, fa nahafinaritra / nanabeazana.
napetraky jakeboat tamin'ny Sun, 08 / 06 / 2017 - 18: 16
Namaly ny Wow, izay faran'izay mahasoa. ... by jakeboat
Vao nandritra ny roa andro farany ...
Nandany ny roa andro farany teo amin'ny farihy. Ity tranonkala ity dia mahatsikaiky ary namela ahy hanamboatra fiaramanidina kely kely. Izy io dia mampihodina manodidina miadana nefa mihozongozona ankehitriny. Misaotra an-tapitrisa noho ny fanampiana rehetra. Ny ankizilahy dia nitondra azy io androany, niaraka tamin'ny tsikitsiky be.
napetraky ttravis amin'ny Mon, 08 / 07 / 2017 - 01: 18
Namaly ny Vao nandritra ny roa andro farany ... by jakeboat
Azoko antoka fa manana fankasitrahana lehibe ianao amin'izao fotoana izao fa fantatrao tsara io motera io. Manantena aho fa manana ny zana-draharahanao ianao mba hahafahany mahazo traikefa izay haharitra mandritra ny androm-piainany. Mahavariana ny habetsahan'ny olona manamboatra ireo HP motors 3.5. Nijery antontan'isa ho an'ity tranonkala ity aho. Vao tonga androany dia nitsidika ny habaka ny olona 234 ary nandany fotoana hamakiana ny tetikasa 3.5. Ireo mpitsidika dia avy amin'ny manerana izao tontolo izao ary amin'ny fiteny maro samihafa. Tsy misy motera hafa. Ny 3.5 no tetikasa malaza indrindra. Ankafizo ny môteranao ary mety haharitra mandritra ny taona 50 hafa farafahakeliny. Raha mahazo loka ianao, dia apetraho eto ny sary vitsivitsy. Sary sy fanehoan-kevitra toy ny anao no valisoa lehibe indrindra amiko. Tom
napetraky Ram Jet tamin'ny Sun, 02 / 11 / 2018 - 23: 24
Tsy mila manam-potoana ianao ...
Tsy mila manamboatra ny moteranao ianao. Natao ho anao rehefa noforonina. Ataovy fotsiny izay azo antoka fa napetaka tsara ny sombin-tsipika mifantoka amin'ny sombin-drakitra ary ny takelaka teboka dia napetraka araka ny tokony ho izy. Raha toa ka mahazo ny ampahany vaovao, ny kofehy, ny condensateurs ary ny teboka dia mametraka azy ireo fotsiny ary manapotika ireo teboka ary manolo ny tebiteby.
napetraky jakeboat tamin'ny Sat, 08 / 26 / 2017 - 07: 33
Izaho dia nanangana ny 3hp Evinrude tamin'ity fahavaratra ity, izay midika hoe, ampahany vaovao amin'ny tsipika, kitapo kitapo sns ... Izany rehetra izany indrindra no ato amin'ity tranonkala ity. Nalainay izany fisambotra izany teo amin'ny ampolony teo ho eo, ary tena tsara be izany. Mbola hanangom-bolo izy, toy ny fohy amin'ny solika, any amin'ny faritra afovoany, fa haingam-pandeha sy malalaka no mihazakazaka be. Ankehitriny dia nahita olana vaovao aho. Nalaintsika bebe kokoa avy eo am-piandohan'ny boatin-tsambo ary aorian 'ny minitra 15 hihazakazahana dia hanomboka hanangom-borona / maningotra tokoa. Raha tsy milevina aho dia hamerina anay any amin'ny fanombohana, fa haingana = miharatsy mihazakazaka. Nanomboka nibanjina ny fanitsiana aho, io moto io ihany no manana ilay izy, tsy afaka mahazo izany toe-javatra izany aho. Marihina fa ny fahitako azy fotsiny amin'ny fanjaitra fanjaitra mipetraka tanteraka, na ny làlana rehetra, dia mbola tsy maty ny mot. Izaho dia vaovao amin'ny milina fa tsy tokony hanapaka ny entona ary hamono ilay motera? Ny takelaka vaovao, ny entona, ny fiaramanidina, ny fiara, ny fiantohana amin'ny solika, ny filaharam-be, ny teboka, sns. Rehefa nosoloako ny fonosana dia nisy mainty, voninkazo, ngezabe tamin'izy ireo saingy hitako fa ratsy kokoa. Mamoaka setroka fotsy fotsy izy rehefa manomboka izany, saingy tsy misy henjana. Ny ankizilahy sy ny ahy dia nahita lavaka crappie teny amin'ny faritra ilan'ny farihy, ary ny hafaliany dia ny mahita ny fihetsiny rehefa manangona azy ireo amin'ny haingo toy ny kankana mamely ny rano. Na izany aza, tsy tiako ny hikorontana ny 20 minitra amin'ny fanombohana. Ny farihy dia manodidina ny 500 acres, raha tokony handray 3hp momba ny 15-20 minitra mba handrakotra io rano be io? Ity no sambonay voalohany izay tsy azoko antoka, fantatro fa 3hp dia tena kely sy tsara ho an'ny trolling.
Miala tsiny mikasika ny firoboroboana izay manantena olona iray mahita zavatra manan-danja.
napetraky ttravis tamin'ny Sat, 08 / 26 / 2017 - 10: 54
Namaly ny Sputtering by jakeboat
Tena azo atao ary tsy ...
Azo atao ary tsy mampiavaka ny mety ilainao haka an'io karba io ary hanadio azy tsara indray. Ny olana amin'ny alàlan'ny motera efa natsangana dia ny ampahany kely ao amin'ny tobin-tsofin'ny entona, ary ny famindrana solika dia miteraka manosika ny famaky ary manaparitaka ny andalan-tsambokely. Izany no andrasana. Na dia nanao izay vitanao aza ianao mba hanadiovana ny zava-drehetra, dia tsy misy toy ny gazy mampikorontana izay mamaha olana amin'ny fotoana. Tsy maintsy nodiovina indray mandeha na intelo aho vao naveriko vao haingana. Tsara avokoa izany rehetra izany. Raha miditra amin'ny avo avo, miditra, na ambany ianao, dia mety hidika izany fa misy lavaka iray ao anaty fiara. Ankoatra izany, ny fanjaitra fanitsiana, raha vao efa novainao dia avelao izy irery. Tsy ampiasaina amin'ny fampiatoana ny motera. Atsaharo ny motera amin'ny alàlan'ny fanosehana ny enta-manilan'ny tavoahangy mankany amin'ny toeram-piantohana izay manidy ny valizy any amin'ny karba. Tsy mila kitapom-batika vaovao ianao mba hanadiovana ny karba mandritra ny vanim-potoana faharoa na fahatelo.
napetraky bigrion tamin'ny Fri, 10 / 20 / 2017 - 09: 12
Fitrandrahana solika anaty tank
Ny solika napetraka sy ny solika dia novolavolaina indray ny fanamafisam-peo, ny carburetor, ary ny dorozan-drano ary nanadio ny tanky tamin'ny loko matevina, tamin'ny 1966 JW21, ary nihazakazaka be tamin'ny entona feno gazy. Ny SECond na fahatelo no nivoaka ny trolling, dia niparitaka sy maty. Rehefa avy nipetraka minitra vitsivitsy izy dia hanomboka sy hihazakazaka mandritra ny fotoana fohy, avy eo hanosika sy ho faty. Niverina tany amin'ny tafio-drivotra tamin'ny fanodikodinam-bolo ilay gadra mba hihazonana azy, izay niteraka setroka maro. Mahafantatra tsara ve?
Ny familiana ny sivan-tsolika dia metaly metaly boribory boribory boribory napetraka teo amin'ny toeram-pilaminana tao an-toerana. Rehefa feno ilay fitoeran-drano dia ampy ny sivana mba ahafahana mamoaka solika matevina, fa raha nidina ny solika, dia tsy ampy ny solika. Tsy azoko ny sivana mandeha amin'ny solika mba hisintonana azy hanadio azy. Azo atao ny manadio amin'ny toerany amin'ny alàlan'ny famenoana ranon-tsavoka na fanodinana lavenona miaraka amin'ny solvent sasany, na hampihatra izany amin'ny fampiharana ny hafanana sy / na Kroil, saingy tsy manam-paharetana ary mamoaka izany ary mametraka sivana an-tsokosoko eo anelanelan'ny famoahana sy ny karba . Ankehitriny, ny JW dia mitazam-pifaliana! Afaka mahazo ny boatin-tsambon'i Grumman Sport aho ho an'ny haingam-pandeha mavesatra loatra. Mihazakazaka tsaratsara kokoa isaky ny mandeha.
MITADIAZANA NY FAMPITANDREMANA ANY AMIN'NY FILATERANTSIKA TANJONA IREO MANAO ANKEHITRINY HO AN'IZAO TONTOLO IZAO IREO MODELY I JOHNNYRUDES.
napetraky Ram Jet tamin'ny Sun, 02 / 11 / 2018 - 23: 39
Namaly ny Fitrandrahana solika anaty tank by bigrion
Nividy Johnson 3HP aho ...
Vao nividy Johnson 3HP aho ary tsy nisy nanadio ny sivana solika. Nanandrana nanamaivana ny lako sy ny asidra Muriatic aho. Ny gazy dia tsy mikoriana afa-tsy ny 1 / 2 voalohany. Nalaiko ilay sivana ary nopotehiko ny filahatry ny varahina nataon'ireto varahina. Miandry fisotroan-drivotra VW avy amin'ny Ebay aho mba handefasana ny efitrano varahina eo amin'ny fitaovana ho an'i Johnson. Azonao atao ny mividy sivana filalaovana OEM vaovao momba ny $ 40.00 nefa tsy handoa izany. Nodioviko ny kitapo enta-mavesatra nentiko nanodidina ny 750 BBs ary teo amin'ny valo latsaka valo. Nividy kapaoty aho tao amin'ny magazay harware mba hampidirana ny lavaka fanangonana solika sy ny lavaka fanangonam-bokatra. Nokapohiko indroa ny ampitso velona avy ao anaty tank ary avy eo dia nanatsofoka azy tamin'ny Formula 409 sy rano. Sakafo madio.
napetraky ttravis tamin'ny Sun, 11 / 05 / 2017 - 12: 52
Eo am-pandrenesana anao dia mahazatra izany miaraka amin'ny fanananao. Nanao fikarohana aho. Ny isa an'ny Evinrude ho an'ny sivana dia 0594034. Tsy nahita izany tany Amazonia aho fa nahita ny lisitra sasany eBay.
Rehefa tsy mety ny rehetra, manandrama eBay. Mividy ampahany maro aho ary mikasa ny hisoratra anarana ho Affiliate eBay, toy ny hoe amazon.com.
Ankafizo ny fiaranao kely kely.
napetraky Raoul amin'ny Mon, 01 / 15 / 2018 - 03: 17
Tsy mahagaga raha ity no ...
Tsy azonao antoka raha ity no toerana marina
Fa manana hazavana kely 1963 aho izay nomena ahy tamin'ny vondrona scout
Manana fiaramanidina tsara izy saingy tsy mahazaka ahy ny loha ary hitako fa ny fihenan-dratsy dia tena mety mila manolo ny piston angamba ny pistons ary manova ny rindrina cylinder
Toa efa reraka ihany koa ny famolavolana trotraka
Izany rehetra izany dia mety vokatry ny fanamafisana ny tsy fahampian-tsakafo ka mety hiorina indray koa ny ambany
Mila manao fanararaotana feno aho mba hikatsaka ny fahasimbana hafa fa ny fanontaniako dia raha misy olona manana traikefa manamboatra ity môtô ity na mahafantatra raha mendrika ny hanaovana fanarenana tanteraka
ary aiza no ahitako ny ampahany nijery ny aterineto ho fanoloana pistons sy ny peratra saingy tsy hitako raha misy fanampiana azo atao
napetraky ttravis amin'ny Mon, 01 / 22 / 2018 - 14: 38
Namaly ny Tsy mahagaga raha ity no ... by Raoul
Inona no mampihorohoro?
Inona no vakin'ny vakiteny amin'ny mpandahatenyo? Tokony ho 70-80 psi.
Sarotra ny mahita zavatra. Mety ho tsara kokoa ianao raha mitady motera iray amin'ny e-bay. Indraindray izy ireo dia manana vola be lavitra noho ny vola laninao amin'ny tapany.
napetraky Raoul amin'ny Mon, 02 / 12 / 2018 - 03: 57
Namaly ny Inona no mampihorohoro? by ttravis
I dont have a compression ...
Izaho tsy misy mpitsaboka faneranana fa esoriko ny takelaka fanararaotana ary hosoloiko ny totozy ary haheno mihintsy avy amin'ny mpanao pistons rehefa miakatra izy ireo mba hanangona azy ary farafaharatsiny iray amin'ny pistons dia toa simba
Amin'izao fotoana izao dia manaparitaka ny sakana mba hahazoana ny antsipirihany amin'ny antsipirihany ary mety handrobona ny baolina hibanjina ireo boaty raha ilainy izany
Fa tsy hitako izay pistons ho azy fa tsy vaovao fa tsy ny tanana faharoa ringaiko dia azo vidiana fotsiny amin'ny fitsangatsanganana marina
napetraky Raoul amin'ny Mon, 02 / 12 / 2018 - 15: 22
Namaly ny I dont have a compression ... by Raoul
okey noraisiko manontolo ...
okey dia nalaiko ny sambo manontolo ary ny bobin-jiro dia misy lozabe sasantsasany ao amin'ny farany ambany ary ankehitriny dia tsy maintsy fantariko raha afaka manamboatra izany fotsiny aho na tsy maintsy mandresy ilay banga
Ary ny roa tonta dia voatifitra ho any amin'ny helo
Ary mila ampahany kely ihany koa aho toy ny fonosina sy ny toy izany ary ny ampahany sasany amin'ny tavoahangy rano fa toa tsara kokoa izany dia noheveriko fa mety
Ka noho izany dia toa izao dia mila 2 angomanga vaovao aho ary mandidy ny setroka feno sy ny ravin-drano fantsom-pamokarana rano (nopotako ny iray amin'ireo lavaka fanesoana noho ny fihoaram-pefy ratsy)
Fa ankehitriny dia mijanona amin'ny zavatra tsy misy ny loko ao amin'ny tranokely dia toa tahaka ny karazana fitarihana no natsipy tao anatin'ilay sakana izay toa tsy voavira
Misy toro-hevitra sy rohy hafa ho an'ny mpanao pistol vaovao dia raisina tsara
napetraky ricklummer tamin'ny Fri, 02 / 16 / 2018 - 07: 01
Mihodina ny pistôn
1963 Evinrude 3hp 3303 ny marin-drano marika engine.com.com mandringa ringana pistons ary misimisy kokoa
napetraky Raoul tamin'ny Wed, 02 / 21 / 2018 - 10: 24
Namaly ny Mihodina ny pistôn by ricklummer
Efa nijery izany rehetra izany aho ...
Efa nijery an'io tranonkala io aho
Mbola azo jerena ihany koa ny perla oversize saingy tsy natao intsony ny pistons na ny teo aloha sy ny oversize
Ankoatra izany, nalaiko tao amin'ny fivarotana iray ilay tranokala ary toa tsy maintsy mandresy lahatra izy ireo
Amin'izao fotoana izao dia miandry ny amin'izay handoavam-bola handoavam-bola vaovao aho ary hanamboatra ny sakana raha tsy ny 200 malaina no misintona ny trigger eo aminy ary manao fanarenana tanteraka satria tena tiako ity motera ity ary mitondra risika amin'ny fividianana bala faharoa sy Ny pistons dia mety ho lafo kokoa raha toa ka manjary ratsy izy ireo
Raha misy olona mahafantatra toerana iray afaka mamorona pistons izay mety hanampy ahy dia efa nifanerasera tamin'ny toerana vitsivitsy saingy nilaza izy ireo fa mila mifandray amin'ny mpivarotra iray fa ny hany mpivarotra evinrude any amin'ny fireneko dia tsy misy na inona na inona ho an'ny môtô
napetraky Raoul tamin'ny Fri, 02 / 23 / 2018 - 02: 59
Namaly ny Efa nijery izany rehetra izany aho ... by Raoul
I did some more digging and ...
Nanao fandrakofana bebe kokoa aho ary nahita tohatra iray miaraka amin'ny fihodinana rehetra ao aminy amin'ny fomba tsara ny fivarotana izay manery ahy hamaky ny famaky vaovao indray ary milaza azy ho motera tsara ary nilaza izy ireo fa mihazakazaka mialoha ny fanaparitahana azy
dia namerina ny vidin'ny 250 ilay mpanamboatra mpanao piston ho an'ireo mpanao pistons ho an'ny blaogy taloha aho ankehitriny ary miaraka amin'ireo ampahany hafa rehetra dia ny hametrahana ny totalin'ny 350 dia izay mendrika ity môtera ity raha toa ka hamidy izany
Ka amin'ny farany, ny bummer izay tsy azoko ampiasaina ny andian-tsoratra voalohany fa farafaharariko dia mahazo baoritra mora entina hampiasa ny samboko aho amin'ny fahavaratra
napetraky boatman350 amin'ny Mon, 09 / 10 / 2018 - 13: 45
Ny 57 dia manamboatra ny jiro kely manana fitaovana hafa ankoatra izany
napetraky ttravis amin'ny Mon, 09 / 10 / 2018 - 14: 18
Namaly ny lightwinn by boatman350
Tsia, mihodina ianao manontolo ...
Tsia, mamindra ny motera iray manontolo ianao raha te-hiverina. Ireo dia nantsoina hoe "dock busters" satria tsy misy ny atsy na ny aroa. Amin'ny tena fampiasana azy dia tsy olana izany.
napetraky boatman350 amin'ny Mon, 09 / 10 / 2018 - 17: 41
Namaly ny Tsia, mihodina ianao manontolo ... by ttravis
misaotra anao ttravis tena cool ...
misaotra anao ttravis tena cool aho dia niraikitra ny antony nahatonga ilay motera afaka nanao 360 feno
napetraky boatman350 ny Thu, 06 / 06 / 2019 - 07: 30
tsy mandeha fotsiny izy ...
Tsy mandeha fotsiny izy ary averinao ny moter 180 mba hiverina ny anarana hoe dock buster izay notenenina
napetraky boatman350 amin'ny Mon, 09 / 10 / 2018 - 13: 53
Aiza ny rano miseho eo amin'ny evolisiona 3hp aho nahita baka vaovao miaraka amina riaka mafy avy amin'ny lafiny, nefa tsy misy na inona na inona eo amiko dia misy andalana eo an-daman'ny shaft misy rano kely dia tokony ho toy izany na misy any amin'ny toerana iray misy onja mahery vaika
napetraky ttravis amin'ny Mon, 09 / 10 / 2018 - 14: 16
Namaly ny impeller by boatman350
Misy mpivady kely ...
Misy mpivady kely manonitra rano sy mivoaka ao amin'ny efamira ambany. Tsy misy rano be dia be izay mivoaka. Ny antsoko dia mitovy amin'ny habetsahan'ny kafe mpamokatra kafe.
napetraky boatman350 amin'ny Mon, 09 / 10 / 2018 - 17: 38
Namaly ny Misy mpivady kely ... by ttravis
dia io lavaka io mitovitovy amin'ny rindrina io eo afovoany izay tokony hivoaka ny rano
napetraky ttravis amin'ny Mon, 09 / 10 / 2018 - 20: 40
Nanana olana mitovy amin'ny ...
Nanana olana mitovy amin'ny tetikasa 3 HP aho. Tsy maintsy nosakanako avokoa ireo andalana rehetra ireo.
napetraky boatman350 amin'ny Mon, 09 / 10 / 2018 - 22: 15
Namaly ny Nanana olana mitovy amin'ny ... by ttravis
Miala tsiny fa tsy maintsy esorina aho ...
Tsy maintsy manala ny motera aho ary ny toerana tokony hodiavinan'ny rano ary efa nalaiko ny lohany
napetraky dlofthouse ny Thu, 08 / 01 / 2019 - 14: 38
Ohatrinona ny rano no mivoaka ny rafitra?
Novakiako tamin'io kofehy io fa ny haben'ny rano mivoaka ny Exhaust Relief dia tokony hitovy amin'ny mpanao tavy fisotroana. Hoy aho hoe manao izany ny ahy. Na izany aza dia somary matahotra an'izany aho, mafana ny loha rehefa afaka mihazakazaka ny fitsapana mandritra ny minitra vitsy dia tsy tiako ho tazonina ny tanako. Thoughts?
PS - Ity no lahatsoratra voalohany ato amin'ity tranonkala mahasoa ity. Misaotra antsika rehetra.
napetraky ttravis tamin'ny Fri, 08 / 02 / 2019 - 13: 57
Namaly ny Ohatrinona ny rano no mivoaka ny rafitra? by dlofthouse
Mila ny laharana modely aho ka izaho…
Mila ny laharana modely aho mba hahafahako manatsara ny fanontanianao. Ny motera sasany dia manana thermostat azo soloina; ny sasany tsy.
napetraky dlofthouse amin'ny Mon, 08 / 06 / 2019 - 16: 31
Namaly ny Mila ny laharana modely aho ka izaho… by ttravis
Firy ny rano
Ny modely dia JW-15
napetraky ttravis ny Thu, 08 / 08 / 2019 - 01: 40
Tsy misy thermostat amin'ny…
Tsy misy ny thermostat amin'io moto io. Toa marina ny habetsaky ny rano. Raha tsy afaka mihazona ny tananao amin'ny herin'aratra ianao dia mety manana famerana ihany koa. Azonao atao ny mandinika ny fanesorana ny lohan'ny cylinder mba hahitana ny bika aman'endriny ary angamba manadio azy. Rehefa misolo azy ianao, dia mahaiza mampiasa rindrambaiko vaovao vaovao .... Tom
napetraky boatman350 amin'ny Mon, 09 / 11 / 2018 - 08: 07
Afaka mampiasa rtv gasket maker aho ...
Azoko atao ny mampiasa rtv mpanamboatra gasket ho an'ny lohan'ny loto matevina ary ny teboka fanangonana ho an'ny motera mankany ambany
napetraky ttravis amin'ny Mon, 09 / 11 / 2018 - 11: 13
Namaly ny Afaka mampiasa rtv gasket maker aho ... by boatman350
Manoro hevitra aho hahazoana ...
Azoko atao ny manoro ny làlan-koditra mendrika. Tsy mety ho matanjaka loatra ny RTV raha te hanohitra ny tsindry sy ny hafanana, ary mety hiditra ao anaty akanjon'ny rano izy ary hampisy olana. Tsy fantatro ny toerana misy anao, fa ho ahy, ny loha loha dia tsy lafo. Fantatro fa ny olona sasany eto amin'izao tontolo izao dia manana fotoana sarotra hikorontana ary mila manamboatra bebe kokoa.
napetraky boatman350 amin'ny Mon, 09 / 11 / 2018 - 13: 12
momba ny fanadiovana ny rano
napetraky ttravis amin'ny Mon, 09 / 11 / 2018 - 13: 26
Nesoriko ny fahefana ary ...
Nesoriko ny fahefana ary nodiaviko ny lalana feno ny rano avy amin'ny fidinan'ny rindrina mba hipoitra miaraka amin'ny reraka ao amin'ny faritra ambany. Nasiako fitifirana lozaka sy kofehy maromaro ary tsilo maromaro mba hahalalako ny zava-drehetra. Mino aho fa nanoratra momba ity tetikasa 3.0 na 5.5 ity aho. Ny sasany tamin'izy ireo dia jamba, noho izany dia nampiasa ny fiaramanidina aho hamelezana ny rivotra ary hijery ny toerana misy azy. Fotoana kely izany. Maro amin'ireo lalana ireo dia kely sady mora tohina, mamono motora maro.
napetraky boatman350 amin'ny Mon, 09 / 11 / 2018 - 21: 35
Hey guys vaovao olana lol ...
Hey ry zalahy vaovao olana lol no nanaisotra ny lohan-doha ary nodioviny avokoa ny lalan-drano rehetra niroborobo be saingy naveriny indray ny lohany (nampiasa ny gorodona voalohany) ary ankehitriny ny motera dia tsy manomboka manamarina fa nipitrahitra tamin'ny fiainana nandritra ny segondra vitsivitsy taorian'ny nametrahana carb madio ao amin'ny efitrano fandevenana saingy tsy misy na inona na inona ... inona no eritreretinareo
napetraky ttravis amin'ny Mon, 09 / 11 / 2018 - 21: 57
Namaly ny Hey guys vaovao olana lol ... by boatman350
Mivadika ny fanjaitra? Ianao ...
Mivadika ny fanjaitra? Azonao atao ny manana ny lohan-drakitra eo an-tampon-doha izay nanenika ny fanjaitra efa lasa toerana ara-dalàna.
napetraky ejfellman tamin'ny Sat, 09 / 15 / 2018 - 17: 39
Ao amin'ny torolalana kasainao ...
Ao amin'ny torolalana nomenao ny 3hp Lightwin (izay tsara, btw) no antsoinao hoe cylinder 1 ny cylinder ambony na ambany?
napetraky ttravis tamin'ny Sun, 09 / 16 / 2018 - 19: 43
Cylinder 1 no ambony ...
Ny cylinder 1 no cylinder ambony.
napetraky Dipstick amin'ny Mon, 09 / 25 / 2018 - 16: 03
Nifanaraka tamin'ny Johnson 50 aloha aho; karba, fiarovana, rameva, ny asa. Manana fiaramanidina tsara izy saingy avy hatrany dia tondraka, mankany amin'ny teboka entin'ny gripa avy amin'ny fifandimbiasam-pandevenana / ny lozam-pifamoivoizana. Rehefa nanamboatra ilay karba aho, dia very ny lohataona kely izay mihazona ny fanjaitra hodiavina mankany amin'ny lelafo. Satria tsy misy ny lohataona sasany ny lohataona, dia averiko miaraka aminy tsy misy izany. Voafandrika izy io. Noho izany, nakariko ny haingon-drivotra ary nametraka loharano iray hitako teo anelanelan'ny tapako taloha aho (manana hipika 3 hp Evinrude / Johnson aho). Mbola tondraka foana izany.
Niverina aho avy eo ny fanjaitra haingam-pandeha 1 & 1 / 2 ary niova ny 3 / 4 ambany.
Pejy ankehitriny 1
Next pejy Manaraka >
Pejy farany Last »